Read Archives - MYANMORE+
ကမ္ဘာ့ထာဝရအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် (၁၀) ဦးက ဘယ်သူတွေလဲ?
Read Soe Thiha Htun - June 4, 2020 0
ကမ္ဘာ့‌ေနရာ‌ေဒသတချို့က ဆင်းရဲ-ချမ်းသာကွာဟမှုနှုန်း‌များပြား‌လာမှု၊ အစားအစာငတ်မွတ်ခြင်းအတိဒုက္ခ‌ေတွများလာမှုသတင်း‌ေတွကို မကြာခဏဆိုသလို ကျွန်‌ေတာ်တို့ဖတ်ဖူး‌ကြပါတယ်။ အဲဒါ‌ေတွရဲ့တခြားတစ်ဘက်မှကာ‌‌ေတာ့ အလွန်အမင်းကြွယ်ဝချမ်းသာ‌‌ေနကြတဲ့ ဒီနေ့ခေတ် မီလျံနာ၊ ဘီလျံနာနဲ့ ထရီလျံနာများစွာကို လူ‌ေတွကအားကျငေးမောနေ‌ေကြာင်း‌ေတွ့ရမှာပါ။ အခုဖော်ပြပေးလိုက်တာက‌ သမိုင်းမှာ ထာဝရအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်‌ေတွအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၁၀) ဦးရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေများဖြစ်နေမလဲ သိရအောင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး...။ 10. Genghis Khan မွန်ဂိုအင်ပါယာရဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်သိကြတဲ့ စစ်ဘုရင် Genghis Khan (1162-1227) က ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝသူ လူချမ်းသားတစ်ဦးပါ။...
Read Soe Thiha Htun - June 1, 2020 0
ကလေးတွေကိုပုံပြင်ဖတ်ပြမယ့် ဦးဦး Hardy
Read Nay Thiha - April 20, 2020 0
ဧပြီ ၂၇ရက်နေ့ကစပြီး ကလေးတွေအတွက် ညအိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေကို Tom Hardy ကဖတ်ပြသွားမှာပါ။ Hardy ဟာ BBC ရဲ့ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ CBeebies channel မှာ ပုံပြင် ၅ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပရိသတ်တွေကတော့ BBC iPlayer မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း YouTube မှာ CBeebies Bedtime Stories လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် video တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Hardy...
Read Soe Thiha Htun - April 8, 2020 0
Coronavirus ကာကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆမလွဲကြစေဖို့
Read Soe Thiha Htun - April 1, 2020 0
လက္ရိွအခ်ိန္ လူမွုကြန္ရက္ေတြေပၚမွာ အမ်ားဆံုးျမင္ေနၾကရတာက coronavirus နဲ့ဆက္စပ္တဲ့အေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ Virus ကူးစက္မွု၊ Virusကာကြယ္ကုသမွုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ိဳးစံုကို လူမွုကြန္ရက္သံုးစြဲသူမ်ားစြာက အခ်ိန္နဲ့အမ်ွကို ေရးသား မ်ွေဝ ေနၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသတင္းေတြနဲ့ အခ်က္အလက္ေတြထဲမွာ အလြဲေတြေတာ့ အမ်ားအျပားပါဝင္ေနပါတယ္။ လက်ရှိအချိန် လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ အများဆုံးမြင်နေကြရတာက coronavirus နဲ့ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Virus ကူးစက်မှု၊ Virusကာကွယ်ကုသမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်မျိုးစုံကို...
အခမဲ့ရနိုင်တဲ့ ebook နဲ့ audiobook များ
Read Nay Thiha - March 26, 2020 0
အခုဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေ လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ရက်ကြာကြာအိမ်ထဲနေရရင်ငြီးငွေ့လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အိမ်ထဲမှာနေရင်း ဖတ်ဖို့ ebook တွေနဲ့ နားထောင်ဖို့ audiobook တွေအခမဲ့ရနိုင်မယ့်နေရာတွေကိုညွှန်ပြပေးချင်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချရင်းဒီအခက်အခဲကြီးကိုအတူတူကျော်ဖြတ်ကြရအောင်ဗျာ။ မြန်မာ ebook နှင့် audiobook များ Ebook ထဲမှာဆိုရင်တော့ Wun Zinn ကိုသုံးလေ့ရှိတယ်။ ကျနော် Wun Zinn Comic app ကိုသုံးကြည့်တာ ဖုန်းနံပါတ်ထည့်တဲ့နေရာမှာ...
Read Soe Thiha Htun - March 13, 2020 0
လက်ရှိအချိန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေရစေတဲ့အရာကတော့ ကူးစက်ပျံ့နံှ့မှုမြန်ဆန်လွန်းပြီး ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (Global Pandemic) အဖြစ်ကိုရောက်လာတဲ့ COVID-19 ခေါ် Novel Coronavirus ပါ။ ဒီ Virus က လူ့အသက်တွေအပြင် လူမှုရေးနဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာပါ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်လာစေပါတယ်။ လူသားတွေကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခဆင်းရဲကြုံစေခဲ့တဲ့ ဒီလိုကပ်ရောဂါဆိုးတွေဟာ ရှေးခေတ်ကာလတွေတုန်းကလည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ပါတယ်။ Centers for Disease Control...
Read Nay Thiha - December 17, 2019 0
Read Nay Thiha - May 8, 2019 0
By Nay Thiha & Gam Seng Maw ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာက ေျပာပေလာက္စရာ စာၾကည့္တိုက္ႀကီးႀကီးေတြမ႐ွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ျမန္မာျပည္က စာအဖတ္ဆုံးႏိုင္ငံစာရင္းထဲမွာမပါဝင္တာကလည္း အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လူထုနဲ႔ အစိုးရအေနနဲ႔ စာဖတ္ျခင္းရဲ႕တန္ဖိုးကို သေဘာေပါက္လာၾကတဲ့အတြက္ လူေတြစာအုပ္ဘက္ကို ပိုအခိ်န္ေပးလာဖို႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။ ဥပမာျပရရင္ Yangon Book Street နဲ႔ Book...
Read Nay Thiha - April 6, 2019 0
ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာထက္ျမတ္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအျမဲရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထင္ရွားတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအေၾကာင္းကို စာနယ္ဇင္းဆရာမ Alyson Curro ကမွတ္တမ္းတင္ ေရးသားထားပါတယ္။ သူမဟာက်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးမူ၀ါဒဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ တေယာက္ျဖစ္ျပီီး တူရကီ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာအလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူမဟာအခုျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနထိုင္ရင္း Girl Power in Myanmar ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ျပဳစုေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္မွာထက္ျမတ္ရဲရင့္တဲ့ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ၁၄ေယာက္ရဲ႕ အေၾကာင္းေရးသားထားျပီး ကေလးသူငယ္ေတြဖတ္ရႈဖို႔အဓိကရည္ရြယ္ေရးသားထားပါတယ္။ သူ႔စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲနဲ႔စာဖတ္၀ိုင္းကို ျမန္မာပလာဇာက Innwa Books & Café မွာ ဧျပီ ၅ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ျပီး...